Faits-Divers – Page 1138 – Midi Madagasikara
Isotry : Jiolahy misaron-tava nanafika
Redaction Midi Madagasikara 18 janvier 2014 Isotry, Jiolahy, misaron-tava, nanafika
Sady misaron-tava no mitondra basy. Tokantrano iray tetsy Isotry no voatafika ny alin’ny alakamisy hifoha zoma teo. Lasa ihany koa ny vola, ny volamena ary ny kojakoja maro tao an-tokantrano. Maro loatra ny fampiasan’ny jiolahy basy. Mila mieritreritra ny mpitandro ny filaminana ny amin’ny hisian’ny fanadihadiana lalina mba hahitana izay tena fipoiran’itony fitaovam-piadiana itony. D.R
Miaramila 350, manao fiofanana any Antsiranana
Redaction Midi Madagasikara 18 janvier 2014 Antsiranana, fiofanana, miaramila
Atao eto Antsiranana hanomboka ny alatsinainy izao ny fiofanana hoan’ireo mpianatra avy ao amin’ny « Centre d’activité de l’academie millitaire d’Antsirabe ». Misy 350 ireto miaramila tonga eto Antsiranana ireto, 18 amin’izy ireo no vehivavy, ahitana ireo avy amin’ny « Eleve officier d’Activité dia ny 35e, 36e 37e promotion, ny 20e promotion Peloton de Formation Millitaire de Cadre Spécialisé », ny 18e PIA…
Ankaraobato : Lasan’ny jiolahy ny 9 tapitrisa Ar, voadaroka ny tompon’ny trano
Redaction Midi Madagasikara 18 janvier 2014 Ankaraobato, Jiolahy, tompon'ny trano, voadaroka
Omaly alina, tonga nanafika teny amin’ny faritra Ankaraobato ny jiolahy nirongo basy. Vokany, voadaroka ny tompon’ny trano, lasan’ny mpandroba ny vola mitentina hatrany amin’ny 9 tapitrisa ariary, vola izay nolazain’ny voatafika fa vidin’ny fiara vao avy namidiny. Nosokirin’ireo mpangalatra ny hidin’ny trano. Tafiditra izy ireo dia ankizy iray no nentiny nambanana basy teo amin’ny tendany.…
Ambohidratrimo : Trano telo norobain’ny jiolahy
Redaction Midi Madagasikara 17 janvier 2014 Ambohidratrimo, norobain’ny jiolahy, Trano
Ny alin’ny alarobia hifoha alakamisy, nisehoana fandrobana intelo nisesy teny Anosiala Ambohidratrimo. Andian-jiolahy nirongo basy no nanafika trano telo be izao. Nitovy hatrany ny fomba nidiran’izy ireo ny trano. Tao amin’ny voalaohany, nopitsohany ny varavarana ary teo izy no niditra. Tsy sahy nihetsika, na dia nahare ny fahatongavany aza, ny tao an-trano. Rehefa azony izay…
Ninie Donia : Noroahina tetsy Antsahavola indray
Redaction Midi Madagasikara 17 janvier 2014 Antsahavola indray, Ninie Donia, Noroahina
Niverina fanintelony teny amin’ny Consulat frantsay etsy Antsahavola indray i Ninie Donia omaly. Ny tompon’andraikitra voalohany tao an-toerana mihitsy no nivoaka ary nanazava taminy fa tokony hivoaka izy satria amin’ny lalàna dia efa toy ny manitsaka ny tany frantsay raha manitsaka ny biraon’ny consulat etsy Antsahavola, ary efa azo enjehina amin’ny lalàna mifanandrify amin’izany ihany…
Toliara : Vazaha 64 taona nanolana zaza tsy ampy taona
Redaction Midi Madagasikara 17 janvier 2014 nanolana zaza, Toliara, tsy ampy taona, Vazaha 64
Teratany frantsay iray 64 taona no voarohirohy ho nanolana zazavavy tsy ampy taona, ny asabotsy 4 janoary lasa teo, tany Tsadamba, 35 km avaratry ny kaominina Manombo Atsimo, distrikan’i Toliara II. Natolotra ny fitsarana omaly ny raharaha rehefa vita ny fakana am-bavany tsy maintsy nataon’ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona. Vokatry ny fanolanana…
Miandrivazo : Manomboka miakatra ny kijeja
Redaction Midi Madagasikara 17 janvier 2014 miakatra, Miandrivazo, ny kijeja
Mananintanina indray ny fiavian’ny andiam-balala ho an’ny faritra andrefan’i Vakinankaratra iny, mipaika amin’ny faritra Menabe. Amin’izao fotoanan’ny rotsak’orana izao mantsy no tena mahafoy ireo atodim-balala miampy ny andro migaigaina. Manomboka foy ireo atodim-balala raha ny vaovao voaray ka mitaintaina ny mponina. Efa maro be mantsy ny vokatra nolalovan’ireo kijeja eny antampon-tanety, izay efa tena maro…
RN7 : Kamiao nitatitra vatosoa nogiazana
Redaction Midi Madagasikara 17 janvier 2014 nitatitra vatosoa, nogiazana, RN7
Milanja 60 taonina ireo vatosoa izay raha ny filazan’ny mpitandro ny filaminana dia tsy ara-dalàna ny taratasy mahasika azy ireo. Avy any Ambatofinandrahana ary saika hotaterina aty an-drenivohitra no sarona teo amin’ny lalam-pirenena fahafito ny kamiao nitondra azy. Raha araka ny loharanom-baovao akaiky ny mpitandro ny filaminana hatrany dia ministra teo aloha sy mpikamban’ny Cst…
Redaction Midi Madagasikara 17 janvier 2014 Andavamamba, Asan-jiolahy, Isotry, Soanierana
67 Ha : 20 lahy nanendaka olona telo mianaka
Redaction Midi Madagasikara 17 janvier 2014 67 HA, nanendaka
Ny alakamisy maraina tokony ho tany amin’ny 2 ora tany ho any, handeha hody avy niasa ny olona telo mianaka, lehilahy lehibe iray ary vehivavy roa, no nifanehatra tamina andiana mpanendaka. Voalazan’ny vaovao fa miisa hatrany amin’ny 20 any ireo olon-dratsy. Teo amin’ny parking no niseho ity asan-jiolahy ity. Tamin’ny tsy nampoizin’ireto olona ireto mihitsy…
← Previous 1 … 1 137 1 138 1 139 … 1 171 Next →